Maya, iPhone 13 kuma muujiyo boqolkiiba batteriga baarka xaaladda | Wararka IPhone
Dhowr saacadood ka hor bilawga soo bandhigidda moodooyinka cusub ee iPhone 13, iPad iyo Apple Watch Sawir ku baahay shabakadda oo aad ku arki karto iPhone leh boqolkiiba batteriga oo ku xigta darajada, baarka xaaladda.
Ugu dambayntii wax waliba waxay u muuqdaan inay yihiin daadad been abuur ah, ugu yaraan si toos ah aaladda. Dhammaan Shaashadaha shaashadda ee aan ka arki karno iPhone 13 iyo kan cusub ee iPhone 13 Pro wali ma muujinayaan boqolkiiba batteriga iyon midigta sare, oo tilmaamaysa in aysan sidaas ahaan doonin
Isticmaalaha ku jira dejinta qaabeynta ma ku dari karaa macluumaadkan batteriga baarka xaaladda? Hagaag, tan hadda ma naqaanno laakiin waxa u muuqda inay caddahay ayaa ah in Xcode 13 simulator-ka cusub ee iPhone 13 Pro Max uu leeyahay meel ballaadhan oo lagu muujiyo macluumaadka daboolista iyo baararka Wi-Fi. Hadda, kuwa rajaynayay inay arkaan macluumaadka batteriga boqolkiiba inta aan ku tuurin shukumaan weli, waxay noqon kartaa in ikhtiyaar lagu daro qaabeynta u oggolaanaysa in la soo bandhigo.
Hadda, waxa aan caddaynaynaa waa ikhtiyaarka lagu dari karo ama la tirtiri karo macluumaadkan (boqolkiiba batteriga) on iPhones aan lahayn darajo, waa la heli karaa, sidaa darteed kuwa doonaya inay arkaan macluumaadkaan waa inaysan lumin rajada. Wax ka yar hal usbuuc waxaan ka takhalusi doonaa shakiga marka dib -u -eegista ugu horreysa ee iPhone 13 -ka cusub ay bilaabato in la arko, hubaal qaar ka mid ah waxaan ku arki doonnaa inay suurtogal tahay in lagu daro macluumaadkan baarka xaaladda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Maya, iPhone 13 kuma muujiyo boqolkiiba batteriga baarka xaaladda